I-WD-40: Ingeniswe ngo-1953
Ukuba uke wasebenzisa i-WD-40 kwinqwelo yeoli kwinto ethile, unokuzibuza, yintoni nje i-WD-40 imele? Ewe, ngokutsho kwenkampani eyenza i-WD-40, i-WD-40 ngokusemthethweni imele
" I- Atter D isplacement 40 th". Leli gama lichanekileyo kwibhuyibhile esetyenziswe yikhemistri eye yanceda ukuphuhlisa i-WD-40 emva kowe-1953. UNorman Larsen wayezama ukuxubusha umgaqo-nkqubo ukukhusela ukubola, umsebenzi owenziwa ngokususa amanzi.
Ukuqhubeka kukaNorm kuhlawulwa xa efezekisile i-formula ye-WD-40 kwi-40 yakhe yokuzama.
I-Rocket Chemical Company
I-WD-40 yaqulunqwa ngabasunguli abathathu be-Rocket Chemical Company yaseSan Diego, eCalifornia. Iqela labasunguli bebesebenza kumgca wendlela yokukhusela i-rust and degreasers ekusebenziseni kwi-industry ye-aerospace. Namhlanje, yenziwe yiSan Diego, e-California-based based WD-40 Inkampani.
I-WD-40 yayisetyenziselwa ukukhusela isikhumba sangaphandle se-Atlas Missile kwi-rust and corrosion. Xa bekufumaniswe ukuba kusetyenziswe indlu emininzi, uLarsen wabuyela kwakhona kwi-WD-40 emagodini e-aerosol ekusebenziseni abathengi kwaye imveliso yathengiswa kuluntu jikelele ngo-1958. Ngowe-1969, i-Rocket Chemical Company yaqanjwa kwakhona emva kwemveliso yayo kuphela ye-WD-40.
Inomdla wokusebenzisa i-WD-40
Iinjongo ezimbini ze-WD-40 zibandakanya umqhubi webhasi e-Asia abasebenzisa i-WD-40 ukususa inyoka e-python eyayibambelele ngaphantsi kwebhasi yakhe, kunye namapolisa asebenzisa i-WD-40 ukuba asuse i-burglar kwimoya yomoya.
Izithako eziphambili ze-WD-40 njengoko zinikezwa kwiinkampani ze-aerosol, ngokwemiqathango ye-US Material Safety Data Sheets, yile:
50% "i-hydrocarbons aliphatic". I-website yomenzi-mali ithi le mali ekufakweni kwamanje ayikwazi ukuchaneka ngokuchanekileyo njengeSododard solvent, umxube ofanayo wama-hydrocarboni.
<25% yepetroleum oil oil base. Ngokuqinisekileyo, ioli ye-mineral okanye i-oil lubricating oil.
12-18% i-hydrocarbon i-aliphatic i-hydrocarbon. Iyancipha i-viscosity ye-liquid ukuze isetyenziswe kuma-aerosol. I-hydrocarbon ikhuphuka ngexesha lesicelo.
2-3% i-carbon dioxide. I-propellant ekhoyo ngoku isetyenzisiwe endaweni ye-gesi ye-petroleum egxininisiweyo yokuthoma ukunciphisa ukutsha kwe-WD-40.
<10% isilungisa izithako.
Isithako esisebenzayo sexesha elide siyioli engeyiyo yenyameko enokuthi isetyenziswe phezu kwendawo esetyenziswa kuyo, ukunikezela ngokubambisa nokukhusela kumswakama. Ioli ihlanjululwa nge-hydrocarbon engavumelaniyo ukwenza i-viscosity fluid ephantsi ukungena kwimisebenzi. I-hydrocarbon engaxhamliyo iphuma, ihambe emva kweoli. I-propellant (okokuqala i-hydrocarbon ye-molecular-weight-hydrocarbon, ngoku i-carbon dioxide) idala uxinzelelo kwi-can ukunyanzelisa umbane ngokusebenzisa umbhobho we-can ngaphambi kokuba uphume.
Iipropati zayo zenza kube luncedo kwizicwangciso zentengiso kunye nezorhwebo. Iindlela ezisetyenziswayo kwi-WD-40 ziquka ukususa ukungcola nokususa i-screws enenkani kunye neebhentshi. Ingasetyenziselwa ukukhulula i-zippers kunye nokuhambisa umswakama.
Ngenxa yokukhanya kwayo (okt low viscosity), i-WD-40 ayisoloko ikhethi ekhethiweyo yemisebenzi ethile.
Izicelo ezifuna amafutha aphezulu e-viscosity zingasebenzisa ii-oyile zombini. Abo bafuna i-oil-middle-range bangasebenzisa i-fat oil.
Qhubeka> Umlando weSwaphu kunye neeDetergents
Ukukhuthaza uxolo ngokusebenzisa ubugcisa
Ukubhengezwa ngokufanelekileyo kwe "Rodeo"
I-Best Tide App ye-iPhone
Imifanekiso yesiFrentshi eneAn and Année